2013-05-19 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Download Link ​တွေ ​သေ​ရင် ​ဖိုင်​မ​ရှိ​တော့​ရင် command ​ရေး​ခဲ့​ဖို့ ​မ​ပျင်း​ပါ​နဲ့
​ကျ​နော့်​အ​နေ​နဲ့​က ​ဖိုင်​တိုင်း​ကို ​လိုက်​ပြီး ​မ​စစ်​နိုင်​ပါ​ဘူး။ ​အဲ့​အ​တွက်​ကြောင့် ​တင်​ထား​တဲ့ ​ဖိုင်​တွေ​ထဲ​က ​လင့်​တွေ ​ပျက်​တာ​တွေ့​ရင် ​ဖိုင်​မ​ရှိ​တော့​တာ ​တွေ့​ရင် ​ကွန်​မန့်​ရေး​ပေး​ခဲ့​ဖို့ ​မ​မေ့​ပါ​နဲ့။ ​အဲ့​လို​ရေး​ခဲ့​မှ ​ကျ​နော့်​အ​နေ​နဲ့ ​သိ​ရှိ​နိုင်​ပြီး ​လင့်​အ​သစ် ​ပြန်​တင်​ပေး​လို့​ရ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​သိ​တာ​နဲ့ ​အ​သစ်​ပြန်​တင်​ပေး​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​အ​ခု​လည်း ms office 2013 ​ကို ​အ​သစ်​ပြန်​တင်​ပေး​နေ​ပါ​တယ်။ ​သိ​ရင်​သိ​တဲ့ ​လင့်​မှန်​သ​မျှ​ကို ​အ​ကုန်​လုံး​ပြန်​တင်​ပေး​နေ​ပါ​တယ်။ ​စာ​အုပ်​တစ်​ချို့ ​လင့်​ပျက်​နေ​တာ​က​တော့ ​ကျ​နော် ​သူ့​အုပ်​စု​လိုက် ​သူ့​အုပ်​စု​လိုက် ​တင်​ပေး​နေ​တာ​မို့​လို့ ​တစ်​အုပ်​ချင်း update ​မ​လုပ်​တော့​တာ​ပါ။ ​စာ​အုပ် ​ဒေါင်း​မည့်​သူ​များ ​စာ​အုပ်​တွေ​ကို ​ခေါင်း​စဉ်​တွေ​နဲ့​ခွဲ​ပြီး ​တင်​ပေး​နေ​တာ​ပါ။ ​ဥ​ပ​မာ​ဗျာ Adobe photoshop, adobe pagemaker, adobe issulator ​စ​တဲ့ adobe ​က ​ထုတ်​တဲ့ software ​တွေ​ကျ​တော့ Adobe product ​နဲ့​သက်​ဆိုင်​သော ebook ​များ ​စု​စည်း​မှု့​ထဲ​မှာ ​အ​ကုန်​လုံး ​ပါ​နေ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ebook ​တွေ​ကို Download ​လုပ်​မည့်​သူ​တိုင်း ​တင်​ထား​သ​မျှ ​တင်​ထား​သ​မျှ ​မြန်​မာ ebook ​များ ​စု​စည်း​မှု့
​ဆို​တဲ့ ​ခေါင်း​စဉ်​နဲ့ ​ဝဘ်​ဆိုက်​ရဲ့ ​ဒု​တိ​ယ ​ပို့စ်​ကို ​မြင်​ရ​မှာ​ပါ။ ​အဲ့​ပို့စ်​ထဲ​မှာ ​အုပ်​စု​လိုက် ​အုပ်​စု​လိုက် ​စာ​အုပ်​တွေ​ကို ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်။ ​နောက်​လည်း ​အဲ့​ပို့စ်​ထဲ​မှာ ​ဝင်​စစ်​ပေး​ပါ။ ​အ​ဓိ​က​ပြော​ချင်​တာ​က​တော့ Link ​သေ​ပြီ​ဆို​တာ​နဲ့ ​ကျ​နော့်​ကို ​ကွန်​မန့်​လေး ​ရေး​ပေး​ခဲ့​ပါ။ ​သိ​တာ​နဲ့ ​ချက်​ချင်း​ပြန်​တင်​ပေး​ပါ့​မယ်။
InFlow Inventory Premium 2.4.0.3 Full With Patch
​မေး tintswe : ​ညီ​လေး​ရေ ​အစ်​ကို​က​တော့ ​ကွန်​ပျူ​တာ​နဲ့ ​ပါတ်​သက်​တဲ့ accessories ​ဆိုင်​လေး ​ဖွင့်​ထား​ပါ​တယ်။ ​အဲ့​ဒါ ​ဆိုင်​မှာ ​ပ​စ္စည်း​တွေ​ကို ​စာ​ရင်း​ပြု​စု​ရ​တာ​နဲ့ ​ဝင်​တာ​နဲ့​ကို ​လူ​က ​လိုက်​မှတ်​နေ​ရ​တော့ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​ဘူး။ ​လွယ်​ကူ​စေ​မယ့် pos software ​လေး​များ ​မ​ရ​နိုင်​ဘူး​လား။ Barcode ​ပါ ​ထုတ်​ပေး​တာ​မျိုး ​လေး​ဆို​ရင် ​ပို​ကောင်း​တာ​ပေါ့။
​ဒါ​က​တော့ POS(Point of Sale Program) ​ပါ။ Small business ​သ​များ​များ​အ​တွက် sales, purchasing, and inventory management ​ပြု​လုပ်​နိုင်​ရန်​အ​တွက် ​အ​ရမ်း​လွယ်​ကူ​တဲ့ pos software ​ပါ။ ​ဈေး​နှုန်း​သိ​ချင်​ရင်​တော့ ​အောက်​က ​မူ​ရင်း​ဆိုက်​မှာ ​သွား​ကြည့်​နိုင်​ပါ​တယ်။ small business ​သ​မား​များ ​အ​တွက် ​အ​ရမ်း​ကို ​အ​ဆင်​ပြေ​ပြေ ​အ​သုံး​ပြု​နိုင်​ပါ​တယ်။ Barcode scanner ​ရှိ​ရင်​တော့ Barcode ​ပါ ​ထုတ်​ပေး​ပါ​တယ်။ barcode scanner ​မ​ရှိ​ရင်​တော့ ​လက်​နဲ့​ရိုက်​ထည့်​ပေါ့။ pos ebook ​နှင့် ​ပါတ်​သက်​ပြီး​တော့​လည်း ​တင်​ပေး​ပါ​ဦး​မယ်။ ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်။
Product List, Barcode
Multiple Units of measurements
Multiple Locations and sublocations
Assemble products from bill of materials
One click simple overflow
Complete advanced overflow
Recorder, Stock tracking, Graphs, Customizable reports
Multi user Network, access rights
Multiple currencies and Languages and many more
Window xp, vista, 7, 8 ​အား​လုံး​အ​တွက် ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တယ်။
​ဒီ program ​လေး​က​တော့ ​သေး​သေး​လေး​ပါ​ပဲ။ ​မိ​မိ ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို ​ဖိုင်​စီ​ချင်​သူ​များ clean up ​လုပ်​ချင်​သူ​များ registry error ​ပြင်​ချင် ​သူ​များ၊ Data ​များ ​မှား​ဖျက်​မိ​မှာ​ကို ​ကာ​ကွယ်​ချင်​သူ​များ ​မှား​ဖျက်​မိ​သော ​ဖိုင်​များ​ကို ​ပြန်​လို​ချင်​သူ​များ၊ ​အ​ရေး​ကြီး​သော ​ဖိုင်​များ ​ကို ​ဖျောက်​ထား ​ချင်​သူ​များ၊ ​စ​တဲ့ features ​ယ​ခု wise care 365 ​တစ်​ခု​တည်း​မှာ ​အ​ကုန်​လုံး​ပါ​ဝင်​ပါ​တယ်။
Zippyshare | Solidfiles | Filecloud | Ziddu | Sharebeast | Tusfiles
vzo ​မှာ conferendo version 6.4 ​အ​ဖြစ် update ​လုပ်​လိုက်​ပါ​ပြီ
​ယ​ခင်​က vzo ​က​နေ conferendo v6.4 ​အ​ဖြစ် ​ပြောင်း​လဲ ​ထုတ်​လုပ်​လိုက်​ပါ​ပြီ. ​ယ​ခု update ​ပြု​လုပ်​လိုက်​သော conferendo ​မှာ email service ​အ​ဖြစ် yourname@conferen.do ​ဆို​ပြီး ​ပေး​ထား​ပါ​တယ်။ email ​က​နေ ​ပို့​သ​လို​ပါ​ပဲ။ ​မေးလ်​ပို့​လို့​လဲ ​ရ​ပါ​တယ်။ vzo ​ဆို​တဲ့ ​နာ​မည်​အ​စား conferendo ​အ​မည် ​ပြောင်း​လဲ ​သွား​ပေ​မယ့် ​ယ​ခင် ​အ​သုံး​ပြု​ခဲ့​တဲ့ vzo account ​နဲ့​ပဲ ​ပြန်​ဝင်​လို့ ​ရ​ပါ​တယ်။ ​ထူး​ခြား​တာ ​တစ်​ခု​က​တော့ normal video screen ​က ​အ​ရင်​က​ထက် ​အ​နည်း​ငယ် ​ပို​ကြီး​လာ​ပြီး​တော့ ​ပုံ​တွေ ​ပို​ကြည်​လင်​လာ​ပါ​တယ်။ Direct link ​က​နေ​ပဲ ​ပေး​ထား​ပါ​တယ်။ window 8 ​အ​တွက် ​ရည်​ရွယ်​ပြီး​တော့ ​ထုတ်​လိုက် ​တာ ​ဖြစ်​ပါ ​တယ်။ ​မြန်​မာ​ပြည်​က ​လူ​တွေ​ဟာ vzo ​ကို ​အ​သုံး​များ​တဲ့ ​ရည်​ရွယ်​ချက်​က​တော့ ​လိုင်း​နှေး​နေ ​တာ​တောင်​မှ vzo ​က ​နေ ​ရုပ်​များ​ကို ​မြင်​တွေ့​နိုင်​လို့​ပါ။ skype ​ဆို​ရင်​တော့ ​လိုင်း​အ​ရမ်း ​ကျ​နေ​တယ်​ဆို​ရင် ​မ​ရ​တော့​ပါ​ဘူး။ ​ပုံ​ရပ်​ရင်​ရပ် ​မ​ရပ်​ရင်​တော့ ​ကျ​သွား​တာ​ပါ​ပဲ။ vzo ​က​တော့ ​တော်​ယုံ​နဲ့ ​ပြုတ်​မ​ကျ​ပါ​ဘူး။ ​ကဲ​လို​ချင်​တဲ့ ​သူ​များ ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ။
Download Link ​တွေ ​သေ​ရင် ​ဖိုင်​မ​ရှိ​တော့​ရင် c...
vzo ​မှာ conferendo version 6.4 ​အ​ဖြစ် update ​လု...